Sii hayaha wasiirka Difaaca oo ciidamo ka tirsan Xoogga kula hadlay Tiyeglow – Radio Muqdisho
Sii hayaha wasiirka Difaaca oo ciidamo ka tirsan Xoogga kula hadlay Tiyeglow
Sii hayaha Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqdey degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool, halkaas oo uu kula soo hadlay ciidammo ka tirsan Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sii hayaha wasiirka Gaashaandhigga Somalia, Mudane Maxamed Sheekh Xasan, ayaa waxaa socdaalkiisa uu ku tagay degmada Tiyeglow ku wehliyey saraakiil ka tirsan ciidammada Xoogga dalka Soomaailyeed, markii halkaasi tagayna waxaa ku soo dhoweeyey masuuliyiinta ciidammada ee ku sugan degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool.
Sii hayaha Xilka wasiirka Gaashaandhigga Somalia, General Maxamed Sheekh, ayaa soo indha-indheeyey gooboaha ay ciidammada Xoogga ku sugan yihiin kaddibna waxa uu meel fagaaro ah kula hadlay ciidammada oo uu u jeediyey hadallo dardaaran iyo guubaabo ah.
Sii hayaha Xilka Wasiirka Difaaca Somalia, ayaa yiri. “halkaan waxaad u joogtaan dhammaantiin waa jiritaanka Qaranka Soomaaliyeed iyo Difaaciiisa, waajib ayaana idin ka saaran sidii aad umadda Soomaaliyeed cadowga uga ilaalin lahayddeen, madaxda Qaranka waxa ay diyaar u tahay in ay ku dadaallaan daryeenkiina, balse waxaan idin ku adkeeyanaa in la dhowro xaquuqda shacabka oo aanan lagu xadgudbin, dhowaanna maxkamadda ciidammada ayaa Tiyeglow laga dhisi doonaa”.
General Maxamed Sheekh Xasan, ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in ciidammada ay u dhabar adeeggaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada inta laga xoreynayo dhammaan deegaannada ay ku dhuumaaleysanayaan, sidoo kale ciidammada ayuu ku ammaanay sida ay u qaateen tababarradii Tiyeglow lagu siiyey.
Kooxda Swansea City oo Amaah Kula Soo Wareegtay Nelson Oliveira
Madaxweynaha Galmudug oo Xeraale kula kulmay Qaybaha Bulshada Degaankaas